Labiaplasty ခံယူရန်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်သြဇာသက်ရောက်စေသောအချက်များ - မီဒီယာ၊ ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာ (၂၀၁၆) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုရှိသည်။
ဗေဒမြင့်တက်ဂျေ 2016 ဖေဖော်ဝါရီ 18 ။ pii: sjv270 ။
Sharp က, G1, Tiggemann M က1, Mattiske J ကို1.
အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တိုးပွားလာ labiaplasty လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလျှက်ရှိပါသည်; သို့သော်အနည်းငယ်သာဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းထွက်ရှာအမြိုးသမီးမြားကိုလှုံ့ဆျောသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။
labiaplasty (= = ၃၅) ကိုခံယူရန်ကြိုးစားသောအမျိုးသမီးများအားမဟုတ်သည့်အမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည် (n = ၃၀) ။ လူနာများ၏မီဒီယာထိတွေ့မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်စံသတ်မှတ်ချက်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ရုပ်မြင်သံကြား, အင်တာနက်, ကြော်ငြာ, ညစ်ညမ်း), ဆက်ဆံရေးဟာအရည်အသွေး, နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာ။
အမျိုးသမီးများသည်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုခံယူသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဆုံးဖြတ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုများသည်“ အသွင်အပြင်”၊ “ အလုပ်လုပ်ခြင်း”၊ “ လိင်မှုဆိုင်ရာ” သို့မဟုတ်“ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ” လှုံ့ဆော်မှုများဟုသွင်ပြင်လက္ခဏာများတွေ့ရသည်။ အလားတူစွာ labiaplasty ရှာသောအမျိုးသမီးများသည်နှိုင်းယှဉ်အုပ်စု (P <.001) ထက်သူတို့၏လိင်အင်္ဂါအသွင်အပြင်ကိုသိသိသာသာလျော့နည်းကျေနပ်မှုပေးခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားအမျိုးသမီးတွေလည်းအင်တာနက်ပေါ်ရှိ (P = .004) အမျိုးသမီးအင်္ဂါဟုများ၏ရုပ်ပုံများကိုပိုမိုထိတွေ့မှုကြုံတွေ့နှင့်ကြော်ငြာ (P = .021) ၌၎င်း, တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအတိုင်းအတာ (P = .010) ဤပုံရိပ်တွေ internalized ခဲ့ဖူး။ ဆက်ဆံရေးဟာအရည်အသွေးအများ၏အစီအမံအပေါ်အုပ်စုနှစ်စုအကြားအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုရှိခဲ့သည်။ သို့သော်တစ်ဦး labiaplasty လုပ်ထုံးလုပ်နည်းခံယူဖို့ရှာကြံအမျိုးသမီးသိသိသာသာနည်းပါးလာလေ့လာမှု (P = .039) ၏အချိန်မှာရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာများ၏အစီအမံအပေါ်အုပ်စုနှစ်စုအကြားမျှကွဲပြားခြားနားမှု labiaplasty ခံယူဖို့ရှာကြံအမျိုးသမီးတွေ (P = .027) ခြုံငုံသူတို့ဘဝနှင့်အတူလျော့နည်းကျေနပ်မှုခဲ့ မှလွဲ. လည်းရှိခဲ့သည်။
အထောက်အထားအဆင့်:3အန္တရာယ်။